Abantu akhethiwe abazingela isibhamu izinguqulo ezimbili: ngokuvamile noma umsebenzi othize. abazingeli abanolwazi nabagijimi ukuthi yini abakudingayo, futhi cishe ngeke udinga iseluleko okukhetha. Ngakho-ke, kulesi sihloko yakhelwe kulabo okokuqala uya esitolo, lapho ukuthengisa abazingela ngezibhamu.
Yiqiniso, i-Internet kanye kweminye imithombo yokwaziswa, kukhona inala amathiphu sendlela ukukhetha ilungelo isibhamu ukuzingela. Phakathi naleso sikhathi, zonke lezi amathiphu ziyancipha nokuzama ukwenza ukukhetha ephelele, okuyinto kungenzeka neze ngisho kwakuthiwa. Ngenxa yalokho, umuntu othenga isibhamu, okuyinto, kubonakala, elihlangabezana nazo zonke "izidingo internetnym", kodwa awukwazi ukuphuma kuphi.
Indlela yokwenza izinqumo ezinhle? Okokuqala, kukhona izidingo jikelele befuna izikhali, okuyinto, uma singakubeka kanjalo, bebodwa sicabangela khona - kungcono inhlangano eliphezulu futhi ukungabi khona zamehlo. Mayelana nalezi zimfuneko eziningi ngempela futhi babhalwe kahle, futhi ngaleyo ndlela akunandaba mqondo ukuze uhlale lapha, kufanele sivume ukuhambisana nanoma imuphi izibhamu. Ukuthengisa izibhamu manje isetjenziswa e spetsmagazinah, lapho kukhona ezihlukahlukene enkulu izikhali esisha futhi ngenxa yalokho ingozi ukuthenga umkhiqizo onesici incane khona, futhi okwamanje kumelwe sibheke yonke indawo, zonke poshatatsya mathupha ukuqaqa futhi reassemble.
Manje into esemqoka. Khumbula ukuthi izikhali - into zomuntu siqu, ungase uthi obuseduze, hhayi kuphela e-ngomqondo ongokomoya futhi senkondlo. Sonke ezahlukene, siba ezahlukene obuphelele izingalo, ukuvela kwamaqembu ehlukene imisipha, futhi ngokuvamile zonke ezahlukene, kodwa izibhamu ezikwenzayo okufanayo, futhi lokho okusiza omunye umzingeli akazange ivumelane omunye. Uma umuntu ecabanga ukuthi ngokuphonsa isibhamu sakhe izikhathi kweshumi bese kubhekwa ukuthi umcibisholo Butt ehlombe, ungakwazi ukunquma ukuthi noma cha kufanelekile, kuba iphutha sina. Cishe impela isibhamu ukuzingela lokuqala aluphelele, futhi kumelwe kukhunjulwe. Musa nje ukuthenga izikhali eqolo noma okukhethekile. I isibhamu okokuqala - kunjani uthando kuqala, eziningi isikhathi futhi inzuzo encane. It funda, futhi musa ukuzingela, futhi ngenxa yalokho umgqomo ingakhetfwa kanje:
- okokuqala, isibhamu kufanele uthanda ukubukeka, ekugcineni, ungathengi lokwela;
- Okwesibili, kungcono kakhulu uma kuba jikelele ingebe 12 gauge, isikhali kufanelekile cishe kunoma iyiphi inhlobo ukuzingela, kulula ukufunda, it is lula ukusebenza ngokomlando;
- Okwesithathu, uma ngiphakamisa isibhamu, ungakwazi uzizwe isisindo, kufanele ubeke abheka okuthile kulula. Kumele sikhumbule ukuthi igqoke ngokwabo futhi ngokuvamile isikhathi eside, ngaphezu kwalokho, kwakuzodingeka ukuba athwale akuyona kuphela isikhali. Ngisho umsebenzi wokufuna duck, sizoyaphi kuphi akudingekile uma isibhamu asifanele isisindo umcibisholo ke nedlanzana vskidok angabenza ngaphandle ukuthi indlovu, bese ayeke;
- Okwesine, esithendeni Butt kufanele kuhle amanga ehlombe, ne index ngomunwe esibangelini kanye endololwaneni ekhululekile. Ngaphezu kwalokho, leli lungiselelo kufanele athathe isibhamu kweso (engacabangile) futhi ngokwemvelo Bhalobhasha, ngaphandle izichibiyelo olwengeziwe. Lapha, akukho seluleko kuyosisiza umzingeli has ukukhetha yena, waqondisa kuphela imizwa yomuntu. Okubi "handiness" isibhamu abakwazi kuphela nokwehlisa ukuqonda umlilo futhi wenze ezinye nemihuzuko ehlombe lakhe, kodwa futhi kuze kube phakade amandla isifiso ukuzingela. Ngaphezu kwalokho, ephakamisela isibhamu sakhe iphuzu elithile (ilitshe okunemibandela), udinga uvale amehlo akho kafushane zayivula ukubona lapho umphongolo wayesehambile. Khona-ke umbukiso phambi unyawo kolunye uhlangothi lokho okwenziwe eye walahlekelana nomhlambi futhi isiqu, futhi ukuphinda reception. Uma ngenxa isikhundla lesifanele somzimba umbono esihle nomaphi futhi njalo - isibhamu - edingekayo.
Ngithemba iseluleko sami izoba wusizo, futhi ungakwazi kalula ukuthenga isibhamu ukuzingela. Ngakho mina ungifundise ukudubula umkhulu, futhi izifundo zakhe babengekho mina lutho. Ayikho fluff, akukho ipeni!
Ibhayisikili: ukulungisa izandla zabo (bheka isithombe). Ukulungisa lentaba emabhayisikili ngezandla
Kuhle PVC isikebhe: abakhiqizi phezulu. Ukukhetha i isikebhe inflatable
Abanomfutho wegazi ophakeme nesifo senhliziyo nasemiphumeleni yaso
Ukuthuthukiswa kwezokuvakasha zezimboni eRussia
Emelyanovo Sikhungo Setindiza ekhatsi Krasnoyarsk. Website Official sezindiza